मानव अधिकार हनन सम्बन्धी उजूरी प्रकृया सम्बन्धी जनहितको सन्देश – National Federation of the Disabled – Nepal
Home Covid-19 Response मानव अधिकार हनन सम्बन्धी उजूरी प्रकृया सम्बन्धी जनहितको सन्देश
माईराइट नेपालसंगको साझेदारी र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महास‌ंघ नेपालद्वारा यस जनहितको सन्देश रेडियो नेपालबाट २०७७ साल पौष ५ गतेबाट बिहानको ७ बजेको प्रमुख समाचारभन्दा ठिक अगाडी प्रसारण भइरहको छ ।
एउटा परिवारमा अपाङ्गता भएको व्यक्ति माथि हिंसात्मक गतिविधि भएको चर्को आवाज सुनिन्छ । यो आवाज बाटो हिड्दै गरेका दिदि बहिनिले पनि सुन्छन् । त्यसपछि……..
बहिनि: होइन दिदि यो रामु काका जहिले पनि ती अपाङ्गता भएको बहिनिलाई किन पिट्छन् यसरी ।
दिदि: हो नि बहिनी रामु काकाले सधैं बहिनीलाई पिट्छन् भने नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिनु पर्यो नी ।
बहिनी: प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिंदा परिवारको कुरा परिवारमा नै मिलाउनु भनेर पठाए रे नी त । यो त मानव अधिकारको हनन भएन र भन्या ? झन् यस्तो कोभिड—१९को माहामारीको बेलामा अब कहाँ भएर उजुरी गर्ने होला त ?
दिदि: ह्या बहिनि तिमी किन आत्तिराको यस्तो बेलामा स्वयम\_ व्यक्ति उपस्थित नभई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालयमा उजुरी टिपाउन सकिन्छ ।
बहिनि: कसरी नि ?
दिदि: ल सुन आयोगमा उजुरी विभिन्न माध्यमबाट उजूरी गर्न सकिन्छ . जस्तैः
— पैसा नलाग्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका] हटलाइन नम्बर ५०१०००० मा सिधै फोन गर्न सकिन्छ, त्यस्तै आयोगको आधिकारिक व्यक्तिलाई फोनबाट उजूरी दिन सकिन्छ ।
—ईमेल इन्टरनेटको पहुँचमा छौं भने त आयोगको वेवसाइट बाट फारम डाउनलोड गरी फारम भरी इमेलबाट पठाउन सकिन्छ । आयोगले भर्खरै मोबाइल एप्स पनि बनाएको छ जसबाट उजूरीलाई मेसेज र भ्वोइस मेसेजबाट पनि पठाउन सकिन्छ ।
बहिनि: बौद्धिक अनि सिकाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिले चाँही कसरी उजूरी दिन सक्नछन् नी ?
दिदि: स्वयम\_ व्यक्तिले उजूरी दिन नसक्ने भएमा lनजको संरक्षक, घर परिवार तथा छरछिमेकी वा नागरिक समाजका प्रतिनिधिले पनि उजूरी दिन सक्छन् ।
न्यारेसन: अपाङ्गता समावेशी कोभिड प्रतिकार्यका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको समन्वय तथा माइराईट नेपालको आर्थिक सहयोगमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासँघद्वारा जनहितमा जारी सन्देश ।
Previous Post	१७ औं मुनिश्वर स्मृति दिवस सम्पन्न !
Next Post	स्थानिय सरकारद्वारा सञ्चालित अपाङ्गता उत्तरदायी बजेट बिनियोजन र कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन